Barkinta Taageerada Gaarka Jumlada iyo Barkinta Taageerada Barkin soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Meibaoli
Naqshadeynta 'Ergonomics', si dabiici ah ayey ugu habboon tahay qoorta iyo dhexda, waxay buuxisaa inta u dhexeysa madaxa, qoorta iyo badda, waxay ilaalineysaa laf-dhabarka ilmo-galeenka iyo laf-dhabarka. Waxay ka caawisaa hagaajinta muuqaalka markaad wadid, yareynta murqaha murugada iyo walbahaarka.
Xusuusta udub dhexaadka xusuusta, maaddada aaminka ah, cufnaanta sare iyo soo noqoshada gaabiska ah, ur aan lahayn, toxil lahayn.
Barkimadda Baaburka: Xajmiga: 29 * 21 * 10cm Miisaanka: 380g
Barkinta Gawaarida: Xajmiga: 40 * 37 * 7cm Miisaanka: 780g
Daboolka: Mesh Fabric ama Customized
Barkinta Gawaarida Gawaarida:
Taageer laf-dhabarka ilmo-galeenka & Yaree xanuunka qoorta: barkintan taakuleynta qoorta baabuurtu waa naqshad ergonomic ah waxayna ku siin kartaa taageero weyn qoortaada, madaxaaga iyo garabkaaga, dabci muruqyadaada, waxay kugu raaxeysaa inta lagu jiro wadista dheer. Barkimadeenna baabuurka ee madaxa, qoorta xanuun ayaa laga nasan karaa, sidoo kale waxay dhiirrigelin kartaa wareegga dhiigga, hagaajinta laf-dhabarka ilmo-galeenka.
Barkin laba ujeedo leh & dherer la isku hagaajin karo: Waxaad u isticmaali kartaa barkinta qoorta kursiga gaariga barkinta hurdo marka aad safreyso masaafo dheer waadna ka fogaan kartaa leexashada qoorta inta aad gaariga wado. Macaamiisha ayaa sidoo kale hagaajin kara dhererka dusha sare marka loo eego dhererka kala duwan si loo helo meel qoorta u fiican.
Qalabka Xusuusta Xusuusta leh & Daboolka La Saari Karo: Barkimadeena Madaxa waxay qaadataa 7 ° raaxo leh iyo xumbo xusuus qaali ah oo ilaalin karta qaabkeeda qaab aan isbeddel lahayn. Qaybta dambe ee kursiga madax ee baabuurtu waxay isticmaalaan naqshad jiinyeer tayo sare leh, way fududahay in la kala furfuro lana nadiifiyo. Daboolka dharka ayaa jilicsan oo raaxo leh, oo leh naqshadeynta mesh hawada dhexda dhexe ee hore, waxay sii wadi kartaa hawada si fiican u socota.
Ku habboon baabuurka, guriga iyo xafiiska: La jaan qaada 95% Gawaarida (isafgarad, yar yar, sedan dhexdhexaad ah / SUV / van / truck), sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa kuraasta qoyska iyo xafiiska.
Barkinta taageerada Lumbar ku habboon ee dhammaan noocyada kursiga xafiiska / gaariga. Haddii aad waqti badan ku lumiso inaad ku fariisato kursiga xafiiska oo aad baabuur ku dhex wadatid, barkintan dambe ayaa si fiican kuu caawin doonta. Waxaa loo qaabeeyey si khaldan si loo yareeyo xanuunka dhabarka sare, dhexe iyo hoose iyo cidhiidhi dhabarka ah, wuxuu kugu taageerayaa inaad kuhesho muuqaal caafimaad qaba waxayna kaa caawineysaa inaad ilaaliso qalooca dabiiciga ah ee lafdhabarta.
Hore: Xusuusta xumbo Taageerada Back barkin
Xiga: Xusuusta xumbo U Shaaf Neck Barkinta
Xusuusta xumbo Desktop Nap barkinta